जिल्लाको पहिचान महोत्सव - Paschimnepal.com
जिल्लाको पहिचान महोत्सव
दैलेख सांस्कृतीक महोत्सव २०७६ का संयोजक यामबहादुर थापासंग महोत्सवका विषयमा गरिएको कुराकानी ।
किन दैलेख महोत्सव ?
दशैंतिहार विचमा सवै घरमा आउने र जमघट हुने भएकाले हामीले सवैलाई महोत्सव आयोजना गरेका हौं । जिल्लालाई चिनाउन धेरै माध्यमहरु छन् । त्यसमध्ये एउट महोत्सव पनि हो । यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्य र सम्पदाहरुको जिल्लालाई सवै मिलेर कुनै न कुनै रुपमा चिनाउनुपर्छ भनेर पनि महोत्सव गर्न लागेका हौं । पंचकोशी तिर्थस्थल, महावु, पंचदेवल, गढी, दुल्लुमा रहेको नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख लगायत हरेक गाउँ टोलमा सस्कृती र सम्पदा रहेको छ । ३२ जातजातिको उद्गम जिल्ला दैलेख हो । यसलाई प्रचार गर्न जरुरी छ ।
तयारी कस्तो चल्दैछ महोत्सव ?
जिल्लाको माहोल उल्लासमय छ । राष्ट्रिय तथा स्थानिय कलाकारहरुका साथै स्थानिय सस्कृतिहरुलाई पनि अवसर प्रदान गरिएको छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त राख्नको लागि प्रदेश प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरीको समन्वयमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलार्र्ईएको छ । दर्शकहरु ढुक्क भएर मेला आलोकन गर्ने, किनमेल गर्ने वातावरण तयार गरेको छौ । दैलेखका उपभोक्ताले सस्तो दरमा सामाग्री किन्नका लागि उपयुक्त मौसममा महोत्सव गरेका छौं । स्वयम सेवक, सुरक्षा दस्ता सहित सम्पूर्ण आयोजक टिम लागिरहेका छौं । यूवा जमातहरु प्रचारप्रसारका लागि उल्लासका साथ लागेका छन् ।
महोत्सवका आर्कषण केके हुन् ?
राष्ट्रिय तथा स्थानिय ख्याति प्राप्त कलाकारहरुको साथमा स्थानिय नृत्य क्लवहरुको प्रस्तुति रहेको छ । दैलेखका अग्रज कलाकारहरुका साथै स्थानीय स्थानीयहरुलाई बढी प्राथमिकता दिन्छौं । स्थानिय सस्कृतिको रुपमा रहेको झाँकी प्रर्दशन रहेको छ । ११ स्थानीय तहबाट झाकीका लागि आह्वान गरेका छौं । ११ स्थानीय तहलाई निशुल्क स्टल दिईएको छ । त्यहाँ गाउँ तथा नगरपालिकामा रहेका उत्पादित बस्तुहरु राखीने छ । त्यस्तै पारिवारिक पञ्चकोशी धार्मिक तिर्थ गर्नेहरुको लागि सुलभ मूल्यमा भ्रमणको प्याकेजको ब्यवस्था मिलाएका छौं । करिव एक सय पचास स्टलहरु रहेकोमा रहेको छ ।
महोत्सव गर्नुको उदेश्य के हो ?
दैलेख बजारमा शुद्ध खानेपानीको ब्यवस्थापन गर्ने, वृद्धाआश्रमलाई सहयोग गर्ने र स्थानीय कला संस्कृती जर्गेना गर्ने रहेको छ । जिल्लाको प्रचारप्रसार गर्ने अर्को उद्देश्य रहेको छ । त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी र बाहिर सर्वसाधारण उच्च प्रविधि जडान गरेर खानेपानीको ब्यवस्थापन गरिसकेका छौं ।
खुल्ला अर्थतन्त्रमा जिल्लाको चहलपहलका लागि मेला महोत्सव हुनु राम्रो कुरा हो । महोत्सव अवधीभर सस्तोमा सामान किन्नका लागि जिल्लाबासी उपभोक्ताहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । मेलामा मनोरञ्जनका लागि विभिन्न खेलहरु लगाईएको छ । विगतका महोत्सवभन्दा अझँ ब्यवस्थीत बनाउन लागेका छौं । सवैको सहयोग र माया पाएका छौं । यहि २९ गतेदेखी सवै काडाँचौर पुगेर महोत्सव अवलोकन गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।
!-- .entry-content --> प्रकाशित मितिः मङ्लबार, अशोज २८, २०७६ 9:24:15 AM
Prevदैलेख साँस्कृतिक महाेत्सवकाे तयारी तिव्र
Nextराष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काद्वारा पदबाट राजीनामा